Raw Unifiram powder (272786-64-8) Vaiti - Phcoker Chemical
Raw Unifiram powder (272786-64-8) Tsanangudzo
Raw Unifiram powder, inozivikanwawo seDM-232, inoshandiswa mishonga inonzi nootropic. Chimiro chayo chakafanana nema ampakine, uye yakabatana zvikuru neRaaw Unifiram powder. Raw Unifiram powder ndechimwe cheupfungwa hwakanyanya kunyanya kuwedzera, uye ine antiamnesic nezvimwe zvinokonzera mukudzidza kwezvipfuwo pamwe kusvika kune chiuru chepamusoro pane simba kupfuura piracetam. Raw Unifiram powder inoratidzirwa kuderedza nguva ye hypnosis inokonzerwa nepentobarbital, pasina kuora mwoyo motokari. Raw Unifiram powder ishizha rakagadzirirwa AMPA receptor modulator.
Kemikari Name DM-232, CHEMBL140717, CTK0J2726, DTXSID00432024, AKOS017975218,2-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-6(2H)-one;(8aR)-2-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-6(2H)-one;Pyrrolo[1,2-a]pyrazin-6(2H)-one, 2-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]hexahydro-
Molecular Wsere 298.3332032
ruvara Yakachena Yakachena
Skukodzera Mvura yakasvibiswa
Storage Temperature TEMPERATURE YOMBAI
Raw Unifiram powder APane Alzheimer Dementia, Kurapa kweCognition Matambudziko, Kurapa kwe NEUROLOGIC DRUGS
mbishi Unifiram powder (272786-64-8)
Unifiram powder (272786-64-8) Meitiro yezviito?
Unifiram ishamwari yakanyatsotenderera modulator ye AMPA yako yekutambira. SekuAmpakine, Unifiram zvinokonzerwa nemagidamate zvinowanikwa muuropi zvichikonzera zviri nani synaptic kutengesa pakati peeurons.
Unifiram inokurudzirawo kugadzirwa kweacetylcholine ichiita kuti miitiro yezviito yakangofanana neNoopept, Pramiraceta, Oxiracetam uye mamwe racetam nootropics.
Pane zvishoma zvakatsvakurudzwa kuUnifiram kupfuura kune imwe shamwari Sunifiram, asi aya maviri emakemikari akabatana zvakasimba uye anotenda kushanda nenzira dzakafanana.
Kufanana nemasangano, Unifiram inotendwa kunatsiridza kudzidza, kurangarira, kufungisisa, simba repfungwa uye kunyanya kugadziriswa.
varumbidzwa Unifiram powder (272786-64-8) Dosage
Vanhu vanoda kushandisa unifiram powder vanofanira kutanga pamatare maduku vachiongorora zvinoitika izvo Unifiram ane muviri wavo unoshanda. Nhamba yacho inogona kuwedzerwa sezvo muviri unoshandiswa nayo. Iwe unogona kutanga pa 5 milligrams yemaji zuva rega rega.
Zvikanganiso of Unifiram powder (272786-64-8)
Mune zvimwe zviitiko, kuwedzera kwekushaya kwepfungwa yemwoyo kwakave kwataurwa. Izvi zvinogona kukonzera kuwedzera kweropa. Apo firimu ye unifuniram inokonzerwa nefivha yakakwirira, chirwere chepfungwa uye musoro chinogona kuonekwa zvakare. Kune dzimwe nguva, kuvhiringidzika uye kusagadzikana kwechikwata chinogona kubhadhara. Kusvika ikozvino, hakuna kupesana pamusoro peUnifiram uye zvimwe zvinowedzera kana mishonga.